Iosif Brodsky। को मातृभूमि र निर्वासनमा मा कवि को जीवनी
यो इतिहास मा एक धेरै असामान्य व्यक्ति छ को बीसौँ शताब्दीको रूसी साहित्य। विश्वव्यापी मान्यता र प्रसिद्धि तापनि यो ब्लक एक्लै यो लायक छ। यो दुनिया मा आफ्नो स्वतन्त्रता tsenivshego केहि भन्दा बढी कवि, लागि अचम्मको छैन। जो Brodsky छ - अब सम्म, यसलाई बरु यो जहाँ धेरै पूर्ण अज्ञात भित्र भन्दा, अधिक प्रेम र रूस को बाहिर सम्मान छ भन्ने विश्वास गर्छन्। जीवनी यो त भयो। अक्सर आफ्नो इच्छा विपरीत विकसित। तर उहाँले कहिल्यै परिस्थितिमा buckled।
सोभियत अवधिको Brodsky जीवनी
ठाउँ र जन्म समय कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण छन्। तर कवि लागि तिनीहरू अझै पनि महत्वपूर्ण छन्। यो Leningrad को कवि को भाग्य लागि सुरूवात बिन्दु भयो भनेर coincided। यहाँ, सामान्य cultured यहूदी परिवारमा, त्यो 1940. Iosif Brodsky मा जन्म भएको थियो। को कवि को जीवनी पूर्व साम्राज्य को पूर्व राजधानी मा, Neva नदी को बैंकहरू मा सुरु भयो। यसको रहस्यमय आभा यो असामान्य शहर हदसम्म यो कवि को भाग्य निर्धारण। कविता धेरै प्रारम्भिक लेखन थाले। र तिनीहरूले उच्च पट्टी कवितात्मक कौशल संग तुरुन्तै सुरु भयो। Brodsky बस कमजोर अनुकरण र भूमिका मोडेल समयमा धेरै युवा प्रतिभा लागि सामान्य अनुपस्थित। आफ्नो कविता सुरुमा, बुझ्न गाह्रो, बहु-आयामी कल्पना शैली pretentious र परिष्कृत, कविता को अत्यधिक व्यावसायिक स्तर थियो। यसरी यो रूसी साहित्य मा प्रवेश र यो एक पटक बाटो रोजेको गर्न, कवि Iosif Brodsky विश्वासी रह्यो। आफ्नो जीवनी पनि तालिम अवधिको काम अवधि छैन, मा साहित्य उहाँले पहिलो कदम आफैले अद्वितीय एक मास्टर रूपमा घोषणा। तर आफ्नो जीवनको बाह्य घटनाहरू एकदम अनौठो र अझै एकदम सोभियत युग trajectory लागि तार्किक विकसित गरेका छन्। मा रूसी साहित्य धेरै प्रभावशाली मान्छे को पहिचान भए तापनि आफ्नो कविता उपेक्षा थिए र सोभियत संघ मा प्रकाशित थिएनन्। आफ्नो काम सोभियत साहित्य को अग्रिम आवश्यक थिएन, र साहित्यिक कवि को nomenclature संग slightest समझौता न जाने छैन लाग्नुभएको थियो। पराश्रयिता लागि लेख अन्तर्गत अदालत र अर्कह्याङ्गेल्स्क क्षेत्रमा निर्वासनमा5वर्ष - थप, यो सोभियत परम्परा थियो। "ओह, के एक जीवनी तिनीहरूले बनाउन हाम्रो लाल-लाग्यौं" - ironically अन्ना Andreevna Ahmatova को खर्च मा। निर्वासनमा कवि देखि कि सोभियत संघ र यसको सीमाना बाहिर unfolded आफ्नो रक्षा सार्वजनिक अभियान फर्के। जीन-पीओएल Sartr फ्रान्स आफ्नो भ्रमणमा समयमा सोभियत nomenklatura delegations गर्न समस्या धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभयो। निर्वासनमा कवि देखि उहाँले विजेता फर्के।
निर्वासनमा मा Brodsky जीवनी
आफ्नो मातृभूमि छोड्न अनिच्छुक, को कवि थियो। तर त्यहाँ repressive मिसिन अस्थायी रूपमा मात्र आफ्नो चिबुक unclenched भन्ने कुरामा कुनै शंका थियो, र निकट भविष्यमा यो गणना र एक बाध्य सुविधा बदला लिन लिन आवश्यक छ। Brodsky स्वतन्त्रता छनौट गरे। 1972 देखि 1996 उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिका मा बस्थे। नोबेल पुरस्कार र कवि विजेता को शीर्षक - म सबै सम्भव सम्मान पुग्यो। कसैले गर्ने Brodsky को प्रश्न सोध्छन्। उहाँलाई संक्षिप्त जीवनी सबै सन्दर्भ पुस्तकहरू र पाठ्यपुस्तकहरु मा पाइन्छ। जब विद्यार्थीहरू यो परिचय परीक्षाहरू लागि तयार।
Pushkin रूप द्वारा "बोरिस Godunov" को सार
घण्टा खोल्ने। कवि क्याथरीन Derisheva
Krylov गरेको छोटो कथा "Dragonfly र कमिला" - को अत्यावश्यक सत्य बच्चाहरु भाषा पहुँचयोग्य
Pugachev Esenina कविता को छवि "Pugachev"। एक कविता आलोचकहरु को मूल्यांकन
Jaroslav Smelyakov (जनवरी 8, 1913 - नोभेम्बर 27, 1972)। जीवन र सोभियत कवि को काम गर्दछ
जीवनी Krylov - प्रसिद्ध fabulist
कसरी छिटो र सही तातो कुकुर खाना पकाउनु
लिसा Brichkina ( "यहाँ Dawns शान्त हुनुहुन्छ ..."): कैरेक्टराइजेशन, वर्णन, अभिनेत्री
Jiangsu, चीन: वर्णन, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या
महिला बेरा काम। फाइदा र नोकसान
उत्तर Ost - यो के हो र कसरी यो थियो
जहाँ यो गंध सधैं राम्रो छ? अब हामी पत्ता!
चकलेट केक Pancake - एक मिठाई दाँत को सपना
के भने Youtube काम गरिरहेको छैन?
प्रबुद्ध absolutism को नीति
सुन्दर पेय - चुकंदर kvass
Süleymaniye - इस्तानबुल मस्जिद: इतिहास, फोटो